यिनी हुन श्रीमानलाई हलो जोत्नु पठाएर छिमेकी केटासँग अवैध सम्बन्ध राख्ने महिला ! रंगेहात समातिएपछि  Hamrosandesh.com
यिनी हुन श्रीमानलाई हलो जोत्नु पठाएर छिमेकी केटासँग अवैध सम्बन्ध राख्ने महिला ! रंगेहात समातिएपछि
मोरङ, असार ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे निवासी (नाम परिवर्तन) धनिराम पौडेलको घरमा फोन बज्छ, पौडेलले फोन उठाएर हेलो भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज आउँछ, हामी प्रहरी बोलेको तपार्इंको बुहारी हामीले समातेका छौँ, तुरून्त आउनुपर्यो । पौडेल एकछिन अक्क न बक्क पर्छन । र, कुरा बुझ्न प्रहरी कार्यालय कुँद्छन । प्रहरीको कुरा सुनेर पौडेल एकछिन छक्क पर्छन र बुहारी लिएर घर फर्कन्छन् । खाना खाएर दिउसो घाँस काट्न गएकी बुहारी होटलमा समातिएको खबर पाएपछि घरमा सबै छक्क पर्छन् । पक्राउ महिलाका श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा २ बर्षदेखि बाहिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर यो बास्तविक सत्य हो । तर, केही समय अघिको घटना हो यो । मोरङ पथरी शनिश्चरेमा आजभोलि यस्ता घटना सामान्य बन्न थालेका छन । श्रीमान बिदेशमा रहेका महिला तथा युवतीहरू आजभोलि पथरी बजारका होटलहरूमा रंगेहात समातिन थालेका छन । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले आफ्नो क्षेत्रमा हुने बेश्याबृत्ति रोक्न बिशेष अभियान सुरू गरेलगत्तै यस्ता घटना सार्वजनिक हुन थालेका हुन। प्रहरीले बेला बेलामा पथरीबजारका होटलहरूमा छापा मार्ने गरेको छ । जतिबेला छापा मारिन्छ, त्यति नै बेला यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोडी पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।
पक्राउ परेका महिलाहरूमध्ये अधिकांशको श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बिदेश रहने गरेको प्रहरीले बताउँछ । पक्राउ परेका मध्ये केही कसैको बुहारी र कसैको श्रीमती रहेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार, यस्ता घटना पथरीमा सामान्य बन्न थालेका छन् । प्रहरीले पथरी क्षेत्रमा गुण्डागर्दी र होटलहरूमा हुने अवैध यौनधन्दा निर्मुल पार्न आफ्नो अभियानमा साथ दिन सबैलार्इ अनुरोध समेत गरेको छ । तर, यस्ता घटना भने रोकिएका छैनन् । मोरङ पथरी शनिश्चरे निवासी (नाम परिवर्तन) धनिराम पौडेलको घरमा फोन बज्छ, पौडेलले फोन उठाएर हेलो भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज आउँछ, हामी प्रहरी बोलेको तपार्इंको बुहारी हामीले समातेका छौँ, तुरून्त आउनुपर्यो । पौडेल एकछिन अक्क न बक्क पर्छन । र, कुरा बुझ्न प्रहरी कार्यालय कुँद्छन । प्रहरीको कुरा सुनेर पौडेल एकछिन छक्क पर्छन र बुहारी लिएर घर फर्कन्छन् । खाना खाएर दिउसो घाँस काट्न गएकी बुहारी होटलमा समातिएको खबर पाएपछि घरमा सबै छक्क पर्छन् । पक्राउ महिलाका श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा २ बर्षदेखि बाहिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर यो बास्तविक सत्य हो । तर, केही समय अघिको घटना हो यो । मोरङ पथरी शनिश्चरेमा आजभोलि यस्ता घटना सामान्य बन्न थालेका छन । श्रीमान बिदेशमा रहेका महिला तथा युवतीहरू आजभोलि पथरी बजारका होटलहरूमा रंगेहात समातिन थालेका छन । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले आफ्नो क्षेत्रमा हुने बेश्याबृत्ति रोक्न बिशेष अभियान सुरू गरेलगत्तै यस्ता घटना सार्वजनिक हुन थालेका हुन। प्रहरीले बेला बेलामा पथरीबजारका होटलहरूमा छापा मार्ने गरेको छ । जतिबेला छापा मारिन्छ, त्यति नै बेला यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोडी पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।
पक्राउ परेका महिलाहरूमध्ये अधिकांशको श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बिदेश रहने गरेको प्रहरीले बताउँछ । पक्राउ परेका मध्ये केही कसैको बुहारी र कसैको श्रीमती रहेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार, यस्ता घटना पथरीमा सामान्य बन्न थालेका छन् । प्रहरीले पथरी क्षेत्रमा गुण्डागर्दी र होटलहरूमा हुने अवैध यौनधन्दा निर्मुल पार्न आफ्नो अभियानमा साथ दिन सबैलार्इ अनुरोध समेत गरेको छ । तर, यस्ता घटना भने रोकिएका छैनन् । मोरङ पथरी शनिश्चरे निवासी (नाम परिवर्तन) धनिराम पौडेलको घरमा फोन बज्छ, पौडेलले फोन उठाएर हेलो भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज आउँछ, हामी प्रहरी बोलेको तपार्इंको बुहारी हामीले समातेका छौँ, तुरून्त आउनुपर्यो । पौडेल एकछिन अक्क न बक्क पर्छन । र, कुरा बुझ्न प्रहरी कार्यालय कुँद्छन । प्रहरीको कुरा सुनेर पौडेल एकछिन छक्क पर्छन र बुहारी लिएर घर फर्कन्छन् । खाना खाएर दिउसो घाँस काट्न गएकी बुहारी होटलमा समातिएको खबर पाएपछि घरमा सबै छक्क पर्छन् । पक्राउ महिलाका श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा २ बर्षदेखि बाहिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर यो बास्तविक सत्य हो । तर, केही समय अघिको घटना हो यो । मोरङ पथरी शनिश्चरेमा आजभोलि यस्ता घटना सामान्य बन्न थालेका छन । श्रीमान बिदेशमा रहेका महिला तथा युवतीहरू आजभोलि पथरी बजारका होटलहरूमा रंगेहात समातिन थालेका छन ।
इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले आफ्नो क्षेत्रमा हुने बेश्याबृत्ति रोक्न बिशेष अभियान सुरू गरेलगत्तै यस्ता घटना सार्वजनिक हुन थालेका हुन। प्रहरीले बेला बेलामा पथरीबजारका होटलहरूमा छापा मार्ने गरेको छ । जतिबेला छापा मारिन्छ, त्यति नै बेला यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोडी पक्राउ पर्ने गरेका छन् । पक्राउ परेका महिलाहरूमध्ये अधिकांशको श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बिदेश रहने गरेको प्रहरीले बताउँछ । पक्राउ परेका मध्ये केही कसैको बुहारी र कसैको श्रीमती रहेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार, यस्ता घटना पथरीमा सामान्य बन्न थालेका छन् । प्रहरीले पथरी क्षेत्रमा गुण्डागर्दी र होटलहरूमा हुने अवैध यौनधन्दा निर्मुल पार्न आफ्नो अभियानमा साथ दिन सबैलार्इ अनुरोध समेत गरेको छ । तर, यस्ता घटना भने रोकिएका छैनन् ।